China Custom ipholiyesta imitya zokwazisa ubhaka Nge ngaphambili enemingxuma Pocket Gym Bag mveliso kunye nabenzi | USunnan
Umtya wePolyester oSasazwayo woKwenziwa kwezeMidlalo ngeNgxowa yeMigca yangaphambili
Uyilo lweklasikhi kunye nolusebenzayo. Ukuvalwa kwe-Drawstring, igumbi lokuhlala eliphambili kunye ne-mesh gumbi langaphambili.
Inombolo yomzekelo: I-SN-B1101
Umbala: Mnyama okanye ngentando yakho
Igama lemveliso Umtya wePolyester oSasazwayo woKwenziwa kwezeMidlalo ngeNgxowa yeMigca yangaphambili
Inombolo yomzekelo I-SN-B1101
Umbala Mnyama okanye wena
Ukusetyenziswa Iklabhu, inkampu, ukunyuka intaba, ukuhamba
IINGXOWA ZAMANQAKU EZIQHELEKILEYOIsingxobo esimnyama esinebhegi yesaka inecandelo elinye eliphambili, lempahla yakho, ipad, ibhotile yamanzi, isambrela, zonke iimfuno zakho. Enye ipokotho yomnatha ngaphambili enelastle kunye ne-buckle ehlengahlengiswayo inokuthintela izinto ukuba zingawi. Unokubeka itawuli yakho, ifowuni yendlebe, itshaja, ijenali. Imfuneko yokufikelela ngokukhawuleza njengamakhadi, umnxeba, amatikiti, amaqhosha. Inokukunceda ukugcina izinto zahlulwe kwaye zifumaneke ngokulula.
IIMPAHLA ZOKUTHUTHA: Ibhegi yethu yobhaka yenzelwe ukuba ubhaka ungazikhulula izandla zakho, kwaye imitya eyomeleleyo eshinyeneyo inokukunceda ukunciphisa umthwalo wamagxa.
UBUKHULU obukhulu: Ingxowa yethu yemidlalo yesaka ibhegi yokulinganisa ibhegi imilinganiselo ye-45 * 34cm, ilungele ulutsha lwamakhwenkwe namantombazana.
UKUZINZISA NGOKUPHELELEYO: Umtya wengxowa yethu enkulu yokuzivocavoca uyenziwe ngelaphu elixineneyo leOxford kunye nomgangatho womgangatho wesiko, oziQinisekayo zeSUPER kwaye umelana nokudinwa kwemihla ngemihla.
OOMATSHINI BAYAHLAMBEKA: Ibhegi yethu yokuthambisa inokuba ngumatshini onokuhlanjwa ukonga ixesha lakho kwaye yome ngokukhawuleza, igqibelele njengezincedisi zokuhamba.
UKUSETYENZISWA KWABONKE: Ifanelekile ukuhamba elwandle, ezemidlalo, ejimini, i-yoga, ukubaleka, ukuqeqesha, ukuqubha, ukudanisa, ukuyokuthenga nezinye izinto kubomi bemihla ngemihla.
UKHUSELEKO NOKUQINISEKILEYO: Ukuba ungumlandeli wezemidlalo oya kumdlalo, into yokugqibela ofuna ukuyenza kukuchitha iitoni zexesha ngokuba ukhuseleko lubi kwiingxowa zakho eziqhelekileyo; leibhegi yomtya kukuvumela ubethwe ngumoya ngokhuseleko!
- Nceda uyisule ngobunono ngelaphu elifumileyo nelomileyo uze uyomise emthunzini xa udyobheke ngomhlaba.
- Nceda uyisongele kakuhle engxoweni kwaye uhlale upholile kwaye womile xa ungasebenzisi ixesha elide.
Egqithileyo Iibhanti ezenzelwe wena zebhegi yokuPrinta umtsalane ubhaka ubhaka - Sungnan
Okulandelayo: Ukuprintwa okuPhezulu okuPhathekayo okuSebenzayo okuTsala iBhegi yeCinch Bag
ibhegi emnyama yokutsala
iingxowa ezirhuqwayo ubuninzi